» Puntland oo ka digtay dagaalo uga yimaada Shabaab iyo Wasiirada Puntland oo si….
Puntland oo ka digtay dagaalo uga yimaada Shabaab iyo Wasiirada Puntland oo si….
January 4, 2013 - Written by maamule - Edited bymaamule ShareDowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa si aad ah kaga cabsi qabta weeraro kaga yimaada Al-Shabaab-ka ksoo horjeeda dolwada Soomaaliya.
Isagoo lahadlayay saxaafada aya Wasiirka Amniga Puntland Khalif Ciise waxaa uu sheegay in Shabaab ay qorshaynayaan weeraro ay ka gaystaan gudaha Puntland.
‘Al-Shabaab qorshahooda waa in ay dhibaato gaystaan, waxa ay Soomaaliya ka sameeyeen wax lamid ah ayay doonayaan in ah halkana kasii wadaan’ayuu sheegay Masuulkan uhadlay Sarakiisha maamulka Puntland.
Waxaa uu sheegay in Shabaab badan oo kasoo tagay gobollada Koofureed ee Soomaaliya in ay gudaha ugaleen deegaanada Puntland ayna xili kasta gaysan karan weeraro dagaal.
“Puntland waa ay la dagaalami doontaa kuwa isku dayaya in ay qal qal geliyaan amaankeeda, waana ka howlgalnay arintas”ayuu si adag usheegay Sargaalkan.
Al-Shabaab ayaa dagaalo kula jira maamulka Puntland, waxaana weeraro ka gaysteen deegaanada Gal-Gala oo horey ay ugu sugnaayeen ciidamo taageersan Shabaab.
One Response to Puntland oo ka digtay dagaalo uga yimaada Shabaab iyo Wasiirada Puntland oo si….
Gurecel says:	January 4, 2013 at 11:28	O tiro badana shabab